Manỳ (mpaminany) - Wikipedia
I Manỳ izay atao hoe Manesy koa dia ilay mpanorina sy mpaminanin'ny manikeisma, izay teraka tamin'ny taona 216 tao Mardino (Mardinu) eo akaikin'i Ktesifôna, ary maty tamin'ny taona 274 na 277 tao Gondisapora (Gundishapur). Avy amin'ny fianakaviana persiana ambony tany Babilôna i Manỳ. Olona tia vavaka ny rainy ka nitaiza azy tamin'ny fivavahana izay tokony ho ny fivavahan'ny Elkasaita. Tamin'ny faha-12 sy faha-24 taonany dia nahita fahitana i Manỳ izay nisehoan'ny anjely taminy nanendry azy ho mpaminanin'ny fivavahana vaovao sy nahazoany fanambaràna lehibe. Nandritra ny diany voalohany tany India no nahalalany ny bodisma. Narovan'ny mpanjaka Shapor I izay nanjaka tamin'ny taona 214 hatramin'ny 272 izy ka nitory teny eran'i Persia sady nandefa misionera eran'ny Empira rômana. Nanambara ny tenany ho mpaminany farany ao aorian'i Zaratostra sy i Bodà ary i Jesoa i Manỳ. Mampianatra izy fa misy ampaham-panambaràna izay tanteraka ao amin'ny fampianarany. Niteraka ny tsy fitiavan'ny Zôrôastriana izany fielezan'ny manikeisma haingana izany ka rehefa tafakatra teo amin'ny fitondrana an'i Persia i Bahram tamin'ny taona 273 dia niampanga an'i Manỳ ho mpanao fampianaran-diso izy ireo ka nandresy lahatra ny mpanjaka hanagadra azy.
Amin'ny teny persiana sy siriaka dia atao hoe Māni, amin'ny teny grika Μάνης / Manês, ary amin'ny teny latina Manes i Manỳ. Mety midika hoe "vato" na "vato sarobidy" ny anarana amin'ny teny sanskrita hoe Mani.
Ny fivavahana naorin'i Manỳ[hanova | hanova ny fango]
I Manỳ no nanorina ny manikeisma tamin'ny taonjato faha-3, izay fifangaroan'ny zôrôastrisma sy ny bodisma ary ny kristianisma. Nandray zavatra be dia be tamin'ny gnôstisisma ny manikeisma. Ny ivon'ny fampianaran'ny manikeisma dia ny fizarany izao rehetra izao ho roa (doalisma), ahitana ny fanjakan'ny Tsara (fanjakan'ny Fahazavana) izay anjakan' Andriamanitra, sy ny fanjakan'ny Ratsy (fanjakan'ny Haizina) izay anjakan'i Satana.
Niely manerana an'i Afrika Avaratra hatrany Eorôpa sy Azia koa izany fivavahana izany. Tao Sina io fivavahana io dia natao hoe "Bodisman'ny fahazavana". I Masindahy Aogostino, ohatra, tamin'ny taonjato faha-4, dia manikeana tamin'ny voalohany nandritra ny sivy taona alohan'ny hiovany ho kristiana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Manỳ_(mpaminany)&oldid=997082"
Voaova farany tamin'ny 17 Septambra 2020 amin'ny 08:55 ity pejy ity.